true suppression /zu-ZA/tools-for-life/suppression/steps/the-antisocial-personality.html read 10 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/suppression_zu_ZA.jpg Imbangela Yokucindezeleka
Kukhulu okuqhubekayo futhi abantu abaningi kakhulu abalungile basebenzela ukudala ikusasa elihle kuwo wonke umuntu.
Kepha okuningi kwalokho kuseza. Ngakho-ke uzomane ulinde? Noma ingabe kukhona ongakwenza khona manje?
Kukhona: Nquma ukuthuthuka futhi uphumelele! Bese uyathuthuka futhi uphumelele!
Ukuthuthuka kusho ukusebenza futhi wenze izinto zenzeke. Kusho ukuthi uyakwazi ukuba nomphumela omuhle kubantu nasezintweni ezikuzungezile futhi kusobala wenza kahle.
Ukuphumela kusho ukuthi wenza kahle kulokhu okwenzayo. Kusho nokuthi wenza imali eningi ukuze ukwazi ukukhokhela zonke izindleko zakho futhi ube nemali esele ukuze uthenge izinto ozidingayo futhi wenze izinto ofuna ukuzenza.
Ayikho enye indlela eqondile futhi enamandla yokuhlula uMuntu Ocindezelayo noma umuntu ophikisayo noma umphakathi ophila kuwo ocindezela abantu bawo kunokuba babathuthukise futhi babaphumelelise.
Konke Umuntu Ocindezelayo noma umphakathi ocindezelayo abazama ukukwenza ukuvikela abantu ukuthi bathuthuke futhi baphumelele.
Ngempela, kufanele ubhekane nezinsongo noma ukuhlaselwa. Kepha ungagxili kuzo. Ziphathe, kepha beka ukunaka kwakho okukhulu ekwenzeni izinto ezizokwenza wena neqembu lakho nibeyingxenye yokuthuthuka futhi nempumelelo.
Awusoze wanyamalala nje empilweni. Awusoze waba yinto engelutho (okuthile okungekho). Futhi indlela engalungile yoksingatha ukucindezelwa ukuzenza ube mncane futhi wenze okuncane futhi ungabonakali, ngethemba lokuthi uzobe unganakiwe. Lokho kumane ukwehlulwa nguMuntu Ocindezelayo noma Umphakathi.
Esikhundleni salokho, yehlula imizamo yokucindezela ngokuthuthuka nokuphumelela!
Uma usafunda lokhu kwenzeka kuwe ukuthi uma kwenzekile wathuthuka futhi waphumelela, uMuntu Ocindezelayo angavele ahlasele ngamandla nokuthi kungcono uqaphele, bese wazi ukuthi abantu abanemicabango enjalo bavame ukuba ngaphansi kokucindezelwa okukhulu. Futhi badinga ukuthola lokhu kucindezelwa futhi bakusingathe noma bakunqamule.
Uma ungabaza noma ukukhathazeka ngokuba ube nokuthuthuka futhi uphumelele, udinga ukuzikhipha engcindezweni (phelisa ukucindezelwa) ngokwakho!
Ngakho-ke kukhona ukunqoba kokugcina (okungcono kokugcina) kunanoma yiliphi Iqembu noma Umphakathi Ocindezelayo.
Isikhali esikhulu kunazo zonke ukuthuthuka futhi uphumelele.
Ngakho yenza njalo.